Mask ပြိုင်ပွဲ လုပ် ရတဲ့ အကြောင်းရင်း ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော – Let Pan Daily
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ၎င်း၏လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာတွင် – Mask ပြိုင်ပွဲ လုပ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ ပြည်သူတွေ maskနဲ့ ယဉ်ပါးပြီး အမြဲတစေသုံးတဲ့ အလေ့အထ ဖြစ်လာစေချင်လို့ပါ။ ဒီလိုဖြစ်ဖို့က အတော်ကြိုးစားယူရမယ်ဆိုတာသိပါတယ်။ မနေ့က video ဆွေးနွေးပွဲမှာ ကြားခဲ့ရ သလိုပါပဲ၊ ဈေးသည်တွေက ဈေးလာ ဝယ်သူတွေလို အချိန်တိုလေးသာ mask တပ်ထားရတာမဟုတ်ဘူး၊ (၄)နာရီလောက် ဆက်တိုက်တပ်ရမယ်ဆိုတော့ မလွယ်ဘူး ဆိုတာမျိုးက အင်မတန်မှန်ပါတယ်။
တရုတ်၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယားတို့မှာ၊ အအေးမိရင်၊ ချောင်းဆိုး ရင်၊ maskတတ်ပြီးမှအပြင်ထွက်တာက ဆယ်စုနှစ်တွေနဲ့ချီပြီးယဉ်ကျေးမှုတစ်ရပ်လိုဖြစ်နေပေမယ့် ယခုcovid ကာလမှာလို လုပ်ကြရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ အလေ့အကျင့်မရှိတဲ့အထဲက ရာသီဥတုကလည်း ပူတဲ့အခါက များနေတော့ mask ကိုကြာကြာတပ်ရတာ မလွယ်တဲ့အလုပ်ကြီးပေါ့။ ပူတဲ့ အပြင် အသက်ရှူကမဝ၊ စကားပြောတာရှင်းရှင်း မကြားရ၊စသဖြင့် maskကိုမနှစ်သက်ရတဲ့ အကြောင်းတွေကြားရပါတယ်။ ဒါတွေက အလေ့အကျင့် ရတာနဲ့အမျှ အဆင်ပြေသွားမယ့်ကိစ္စတွေပါ။ စမ်းကြည့်ပါ။ ကျွန်မတို့တွေက တာဝေး အပြေးသမားတွေလေ။
အမျိုးသားတွေပြိုင်ပွဲဝင် ဖို့ ဆော်ဩ လိုက်တော့ ဘာ့ကြောင့်maskမချုပ်နိုင်ကြောင်း တင်ပြ လာတဲ့ အချက်ကလေးတွေက ပြုံးစရာ၊ ချစ်စရာ၊ သနားစရာပါ. (“အိမ်ကမိန်းမကခိုင်း လွန်းလို့ ” စသဖြင့်။ ကျွန်မတို့ပြည်သူတွေတော်ကြပါတယ်။ Maskတွေက ပုံစံအမျိုးမျိုး၊ လှလှ လေးတွေ၊ ဝတ်ချင်စရာလေးတွေ။ ကျွန်မချုပ်တဲ့ mask ပုံလေးလည်းတင်ထားပါတယ်။ ပြိုင်တဲ့အထဲပါဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ချုပ်တဲ့ အထဲပါရုံသက်သက်ပါ။ ပုံစံကရိုးရိုးပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ထူး ခြားတာ တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။ လက်ချုပ်တဲ့အပိုင်းကကျွန်မလုပ်တာဖြစ်ပေမဲ့ပိုမြန်မြန်ပြီးဖို့အတွက် စက်နဲ့ချုပ်တဲ့အပိုင်းလည်းပါပါတယ်။ ဒီအပိုင်းကိုတော့ ကျွန်မကိုယ်ရေးအရာရှိက တာဝန်ယူ ချုပ်ပေးပါတယ်။ သူကအမျိုးသားလေးပါ။ သားတွေလည်း မညံ့ပါဘူး။
နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံ ပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျက ၎င်းငျး၏လူမှုကှနျယကျ စာမကျြနှာတှငျ – Mask ပွိုငျပှဲ လုပျရတဲ့ အကွောငျးရငျးကတော့ ပွညျသူတှေ maskနဲ့ ယဉျပါးပွီး အမွဲတစသေုံးတဲ့ အလအေ့ထ ဖွဈလာစခေငျြလို့ပါ။ ဒီလိုဖွဈဖို့က အတျောကွိုးစားယူရမယျဆိုတာသိပါတယျ။ မနကေ့ video ဆှေးနှေးပှဲမှာ ကွားခဲ့ရ သလိုပါပဲ၊ ဈေးသညျတှကေ ဈေးလာ ဝယျသူတှလေို အခြိနျတိုလေးသာ mask တပျထားရတာမဟုတျဘူး၊ (၄)နာရီလောကျ ဆကျတိုကျတပျရမယျဆိုတော့ မလှယျဘူး ဆိုတာမြိုးက အငျမတနျမှနျပါတယျ။
တရုတျ၊ ဂပြနျ၊ ကိုရီးယားတို့မှာ၊ အအေးမိရငျ၊ ခြောငျးဆိုး ရငျ၊ maskတတျပွီးမှအပွငျထှကျတာက ဆယျစုနှဈတှနေဲ့ခြီပွီးယဉျကြေးမှုတဈရပျလိုဖွဈနပေမေယျ့ ယခုcovid ကာလမှာလို လုပျကွရတာမြိုးမဟုတျပါဘူး။ ကြှနျမတို့နိုငျငံမှာ အလအေ့ကငျြ့မရှိတဲ့အထဲက ရာသီဥတုကလညျး ပူတဲ့အခါက မြားနတေော့ mask ကိုကွာကွာတပျရတာ မလှယျတဲ့အလုပျကွီးပေါ့။ ပူတဲ့ အပွငျ အသကျရှူကမဝ၊ စကားပွောတာရှငျးရှငျး မကွားရ၊စသဖွငျ့ maskကိုမနှဈသကျရတဲ့ အကွောငျးတှကွေားရပါတယျ။ ဒါတှကေ အလအေ့ကငျြ့ ရတာနဲ့အမြှ အဆငျပွသှေားမယျ့ကိစ်စတှပေါ။ စမျးကွညျ့ပါ။ ကြှနျမတို့တှကေ တာဝေး အပွေးသမားတှလေေ။
အမြိုးသားတှပွေိုငျပှဲဝငျ ဖို့ ဆျောဩ လိုကျတော့ ဘာ့ကွောငျ့maskမခြုပျနိုငျကွောငျး တငျပွ လာတဲ့ အခကျြကလေးတှကေ ပွုံးစရာ၊ ခဈြစရာ၊ သနားစရာပါ. (“အိမျကမိနျးမကခိုငျး လှနျးလို့ ” စသဖွငျ့။ ကြှနျမတို့ပွညျသူတှတေျောကွပါတယျ။ Maskတှကေ ပုံစံအမြိုးမြိုး၊ လှလှ လေးတှေ၊ ဝတျခငျြစရာလေးတှေ။ ကြှနျမခြုပျတဲ့ mask ပုံလေးလညျးတငျထားပါတယျ။ ပွိုငျတဲ့အထဲပါဖို့မဟုတျပါဘူး။ ခြုပျတဲ့ အထဲပါရုံသကျသကျပါ။ ပုံစံကရိုးရိုးပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ထူး ခွားတာ တဈခုတော့ရှိပါတယျ။ လကျခြုပျတဲ့အပိုငျးကကြှနျမလုပျတာဖွဈပမေဲ့ပိုမွနျမွနျပွီးဖို့အတှကျ စကျနဲ့ခြုပျတဲ့အပိုငျးလညျးပါပါတယျ။ ဒီအပိုငျးကိုတော့ ကြှနျမကိုယျရေးအရာရှိက တာဝနျယူ ခြုပျပေးပါတယျ။ သူကအမြိုးသားလေးပါ။ သားတှလေညျး မညံ့ပါဘူး။